Tag: kushambadzira maitiro | Martech Zone
Tag: kushambadzira kwemaitiro
Muvhuro, March 29, 2021 Muvhuro, March 29, 2021 Tom Kuhr
2020 zvakanyatso shandura iro basa rezvenhau rinotamba muhupenyu hwevatengi. Yakave nzira yehupenyu kushamwari, mhuri uye vatinoshanda navo, foramu yezvematongerwo enyika kumisikidza uye nzvimbo yezviitiko zvenguva dzose uye zvakarongwa uye kuungana. Shanduko idzo dzakaisa hwaro hwezviitiko zvinozogadzirisazve pasocial media kushambadzira pasi muna 2021 nekupfuura, uko kushandisa simba revamiriri vechiratidzo kuchakanganisa nguva nyowani yekushambadzira kwedigital. Verenga pamusoro kuti uwane nzwisiso pane
6 Tekinoroji Trends mu2020 Mamaki ese Anofanirwa Kuziva Nezve
China, May 7, 2020 Wednesday, May 6, 2020 Christina Lyon
Hazvina chakavanzika Marketing dzinokura vape- nokuchinja uye zvakagadzirwa mune zvemichina. Kana iwe uchida kuti bhizinesi rako rimire, uunze vatengi vatsva uye wedzera kuoneka pamhepo, iwe uchafanirwa kushingairira nezvekuchinja kwetekinoroji. Funga nezvetekinoroji maitiro munzira mbiri (uye yako mindset ichaita musiyano pakati pekubudirira mushandirapamwe nemakiriketi mune ako analytics): Chero tora matanho ekufunda maitiro uye woashandisa iwo, kana kusara kumashure. Muizvi
Shanu Kushambadzira Maitiro CMOs Anofanirwa Kuita Pane Muna 2020
Chipiri, Zvita 17, 2019 Chipiri, Zvita 17, 2019 Jay Atcheson
Nei Kubudirira kunotsamira pazano rinogumbura. Kunyangwe kudzikira kwemabhajeti ekushambadzira, maCMO achiri netariro nezve kugona kwavo kuzadzisa zvinangwa zvavo mu2020 zvinoenderana neGartner yegore ra2019-2020 CMO Spend Survey. Asi tariro isina chiito haina maturo uye maCMO mazhinji anogona kunge ari kutadza kuronga nguva dzakaoma dziri pamberi. MaCMO anonetsekana izvozvi kupfuura zvavaive panguva yekuderera kwehupfumi, asi hazvireve kuti vanogona kunamira pasi kuti vabude kunze kwakaoma
Wepamusoro 3 Kushambadzira Kukanganisa Mabhizinesi Matsva Anoita
China, Kukadzi 4, 2016 Chitatu, Kukadzi 3, 2016 Maka Montini
Nei wakatanga bhizinesi rako? Ini ndichatengesa iyo purazi iyo "nekuti ini ndaida kuve mushambadzi" yanga isiri mhinduro yako. Nekudaro, kana iwe wakaita semazana evaridzi vemabhizimusi madiki andakashanda newe pamwe wakaziva nezve makumi masekondi mushure mekuvhura kwako mikova kuti kana iwe ukasava mushambadzi, iwe waisazove uri muridzi webhizinesi diki. kwenguva refu. Uye, kutaura chokwadi, izvo zvinokugumburisa nekuti haufarire
2015 Nyika yeDhijitari Kushambadzira
Mugovera, Kukadzi 7, 2015 Chishanu, February 6, 2015 Douglas Karr
Tiri kuona shanduko yakanyanya kana zvasvika pakushambadzira kwedhijitari uye iyi infographic kubva kuSmart Insights inoputsa marongero uye inopa imwe data iyo inotaura zvakanaka kuchinja. Kubva pakuona kwesangano, isu tiri kutarisa seanowedzera uye mamwe masangano anotora akasiyana siyana masevhisi. Pave nemakore angangoita matanhatu kubvira pandatanga agency yangu, DK New Media, uye ini ndakarairwa nevamwe vevaridzi veanoshanda kwazvo muindastiri
Dhijitari Kushambadzira Maitiro & Kufembera kwa2014
Svondo, Ndira 5, 2014 Douglas Karr
Ndinoziva kuti pane kumwe kudzokorora pano nezvimwe zvezvinyorwa zvandanga ndichigovana kwazviri ini ndinotenda vatengesi vanofanirwa kuisa pfungwa dzavo gore rino… Gore ra2014 - kushambadzira kwedhijitari kwasvika padanho nyowani uye kunoramba kuchidaro. Zvisinei, vamwe vatengesi vachiri kushamisika - “Ndezvipi zvinhu zviri kuzokanganisa kushambadzira kwangu gore rino uye